Wafti ka Socday Qoyska Trump Oo Gaadhay Magalada Qudus. – Heemaal News Network
Wafti ka Socday Qoyska Trump Oo Gaadhay Magalada Qudus.
Gabadha uu dhalay madaxweynaha Maraykanka Ivanka Trump iyo ninkeeda saamaynta badan Jared Kushner ayaa gaaray magaalada Qudus wax yar ka hor inta aanan si rasmi ah loo furin safaaradda Maraykanka oo loo raray magaalada Qudus.
Go’aanka safaaradda loogu rarayo safaarada magaalada Qudus ayaa waxaa loo fasirtay in uu Maraykanka si buuxda u aqoonsaday in caasimadda Israa’iil ay tahay magaalaas, taasna waxa ay ka caraysiisay Falastiiniyiinta iyo dunida Islaamka kale.
Ra’isulwasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa dalalka kale ugu baaqay in iyaguna safaaradahooda u raraan magaalada Qudus, isaga oo ku tilmaamay in ay tahay tallaabo wanaagsan.
Hase yeeshee safaaradda Maraykanka waa mid kumeelgaar ah, halka shaqaalaha iyo shaqada inteeda badan ay weli ku hartay magaalada Tel Aviv.
Xoghayaha hantida guud ee Maraykanka Steven Mnuchin iyo ku xigeenka xoghayaha arrimaha dibedda John Sullivan ayaa ka mid ah dadka ka qeybgalaya furitaanka.
Midoowga Yurub ayaa diidmo adag kala hor yimid tallaabada uu Maraykanka qaaday, iyada inta badan safiirada aysan xaadiri doonin furitaanka safaaradda.
Madaxweynayaasha Guatemala iyo Paraguay ayaa ka qeybgalaya, iyada oo labadan dal ay horey u sheegeen in ay safaaradahooda u rarayaan magaalada Qudus.
Muuse Biixi Oo ka Hadlay Xuska 18ka May Baaqna U Diray Dowladda Somaliya.
Maraykanka Oo la Saftay Dowladda Britain Eedeeyayna Ruushka.
March 15, 2018 Caalamka
Dowladda Maraykanka ayaa is barbar taagay dowladda Britain, kuna eedeeyay Ruushka in ay halis galinayaan ammaanka adduunka. Afhayeenka Aqalka Cad Sarah Sanders ayaa sheegtay in Britain ay ku saxantahay ceeyrinta 23-kii dublamaasi ee Ruushka ahaa,waxuuna […]